मुसहरबस्तीमा पस्दा धुर्मुसले जे देखे … - inaruwaonline.com
मुसहरबस्तीमा पस्दा धुर्मुसले जे देखे …
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २८, २०७२ समय: ६:०४:४०
२८ पुष। महोत्तरीको बर्दिवास चोकबाट साढे दुई किलोमिटर भित्र छ एउटा मुसहर वस्ती । हास्यकलाकार जोडी सिताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली एक साता अघि उक्त वस्तीमा पस्दा विकराल अवस्था देखे ।
उक्त बस्तीको भ्रमणलाई धुर्मुस यसरी वर्णन गर्छन्:
महोत्तरीको बर्दिवासलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्ने विषयमा अन्तरक्रियाका लागि सरसफाई दूतका हैसियतले एक साताअघि हामी पुगेका थियौं बर्दिवास । अन्तरक्रियामा भेट भए, राजकरण महतो । उनी एक पत्रकार साथै सामाजिक अभियन्ता पनि रहेछन् ।
अन्तरक्रियापछि हामीले यस क्षेत्रमा कुनै वस्तीमा गएर त्यहाँको सरसफाईको अवस्था बुझ्ने इच्छा व्यक्त गर्‍यौं । मैले सकभर पिछडिएको र सरसफाईको चेतना नपुगेको गाउँ सिफारिस गर्न राजकरणजीलाई भनेँ ।
‘तपाईंले चाहेको जस्तै ठाउँमा पुर्‍याउँछु’ भन्दै उहाँले जुँगा मुसार्नुभयो । राजकरणजीको पछि लागेर हामी एउटा मुसहर बस्तीमा पस्यौं । त्यो बस्तीको हालत मैले कल्पना गरेको भन्दा पनि दयनीय रहेछ । सरसफाईको कुरै छाडौं, न्यूनतम मानवीय आवश्यकताहरुसित पनि अपरिचित थियो त्यो बस्ती । के कुराको अभाव थिएन त्यो गाउँमा ?
त्यहाँ करिब ६० घर रहेछन् । घर भन्नु मात्रै, टाटले बारेको एउटा कोठाको सानो झुपडी । हामी लगभग सबै झुपडीमा छिर्‍यौं । पकाउने, खाने र सुत्ने सबै एकै ठाउँ हुँदोरहेछ । छोराछोरी, आमाबुवा, हजुरवा-हजुरआमा सबै एकै ठाउँमा डल्लो परेर सुत्नु यस बस्तीका लागि सामान्य हो । ओढ्ने-ओछ्याउने न्यानो कपडा कहाँ पाउनु ? तल पराल वा सुकुल ओछ्याएर सुत्ने अनि माथि पातालो बर्को ओढ्ने । के निद्रा पर्दो हो यो जाडोमा । लगलग काँप्दै रात बिताउँदा हुन् ।
तराई मूलका वासिन्दामा सबैभन्दा तल्लो जाति मानिदा रहेछन् मुसहर । वरिपरी उपल्लो जाति भनिनेहरुको बसोबास छ । तर, कसैको नजर पनि यहाँ परेको पाइएन । बस्तीका मानिसहरुको जीवनयापनको कुनै दरिलो स्रोत छैन । बिहान उठ्ने अनि दाउरा लिन जंगलमा जाने । त्यहि दाउरा बेचेर आएको पैसाले त्यो दिनका लागि दालचामल किन्ने । त्यहि पैसा पनि लोग्ने मान्छेले जाँड खाएर सिध्याए भने परिवारै भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेछ । भोलि के खाने भन्ने त टाढाको कुरा ।
हामीलाई सबैभन्दा बिझाएको कुरा चाहिँ बस्तिका एक जना पनि केटाकेटी स्कुल जाँदा रहेनछन् । जबकि वस्तीबाट दुई सय मिटर मात्रै अगाडी प्लस टुसम्म पढाई हुने क्याम्पस छ । सिंगो बस्तीमा जम्मा एक जना भेटिए पढेका व्यक्ति । कागतालीले पढ्न पाएका यी दुर्लभ युवा कक्षा ११ मा अध्ययनरत रहेछन् ।
केटाकेटी किन स्कुल जाँदैनन् भनेर हामीले बुझ्न निकै प्रयास गर्‍यौं । बाबुआमासित सोध्यौं र त्यसपछि विद्यालयमा पनि गएर बुझ्यौं । उनीहरुको भनाइ परस्परविरोधी थिए । बाबुआमा भन्छन्, स्कुलमा जाँदा ड्रेस नलगाएको भनेर शिक्षक शिक्षिकाले हपार्छन् । पिट्छन् पनि । तर, विद्यालयको भनाइ थियो, सबै कुरा निःशुल्क हुँदा हुँदै पनि बाबुआमाले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदैनन् । अझै राम्रोसित बुझेपछि थाहा भयो, कि बाबुआमा बिहानै दाउरा खोज्न हिँड्दा रहेछन् ।
त्यसपछि केटाकेटी गुच्चा खेलेर दिन बिताउँदा रहेछन् । बाबुआमाले किन विद्यालय गइनस भनेर पनि नसोध्ने, विद्यालयले किन छोराछोरी विद्यालय नपठाएको भनेर अभिभावकलाई नकस्ने । केटाकेटीलाई त विद्यालय नजाँदै हाइसन्चो ।
बालविवाह यहाँ ठूलो समस्याको रुपमा रहेका पाइयो । काखमा नानी च्यापेर दुध खुवाइरहेका आमाहरुले आफ्नो बच्चा कति महिनाको वा वर्षको हो भनेर भन्न सक्दैनन् । यहाँका धेरै मानिसहरुलाई आफ्नो उमेर थाहा छैन । अहिले कति साल हो, कुन महिना हो र के बार हो कसैलाई हेक्का छैन । नेपाली भाषा अधिकांसले बुझ्दैनन् । गाउँमा कसैसित जन्मदर्ता छैन । २५-३० वर्षका युवाहरुले नागरिकता बनाएका छैनन् । नेपाली नागरिक भएको कुनै प्रमाण छैन उनीहरुसित ।
हामीले धेरै झुपडीभित्र चुल्होमै केटाकेटीले दिशापिशाब गरेको देख्यौं । त्यो सफा गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने सोच नै छैन कसैको । ठुलाहरुले पनि जथाभावी दिशापिशाब गर्नाले सिंगै गाउँ शौचालयजस्तो गनाइरहेको थियो । चर्पीमा दिशापिशाब गर्ने चेतना यहाँका वासिन्दामा कसैले पुर्‍याएको छैन ?
हामी जाँदा एकजना बुढी आमा पखाला लागेर लडेकी थिइन् । उनलाई जिवनजलसम्म खुवाउने कोही छैन । केहि दिनअघि जन्मेको बच्चा नांगै छ । त्यहाँ कोही विरामी भयो भने औषधि उपचार गर्ने खालको परिपाटी नै देखिएन । त्यसको लागि पैसा पनि कसैसित छैन ।
हामी सो गाउँमा तीन घन्टा बितायौं । हामीलाई यस्तो लाग्यो कि सरसफाई अभियानको केन्द्रविन्दू यहि गाउँलाई बनाउनुपर्छ । तर, यो गाउँको समस्या भनेको सरसफाई मात्रै होइन । अशिक्षा र गरिबी झन् ठूलो समस्या हो । यस्ता कुराहरुमा हामीले व्यक्तिगत तवरबाट गरेर सम्भव छैन । राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म नर्क जस्तो यो गाउँमा कसैको आँखा पुगेको देखिएन । हामीले सुरुमा मिडियामार्फत यो बस्तीको विषयमा उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं । त्यसपछि सरकारी निकायहरुको पनि ढोका ढक्ढक्याउने छौं ।अनलाइनखबरबाट